KaOS Linux na-anata KDE Plasma 5.16 na Linux Kernel 5.1 | Site na Linux
KaOS Linux na-anata KDE Plasma 5.16 na Linux Kernel 5.1
Sistemụ arụmọrụ KaOS Linux weputara June 2019 wuo site na mmelite ngwanrọ kachasị ọhụrụ na ndozi nchekwa ebipụtara na ebe nchekwa ebe ISO ikpeazụ.
KaOS 2019.07 dị maka nbudata na ihe ọhụụ bụ gburugburu ihe osise KDE Plasma 5.16.2 tinyere KDE Ngwa 19.04.2 na KDE Frameworks 5.59.0, ihe niile gbasara Qt 5.13.0.
Ọzọkwa, ọ na-abịa na LibreOffice 6.2 nke na-akwado Qt5 / KF5, na-edochi Calligra dị ka akụrụngwa ọrụ ndabara na KaOS. Akụkụ ndị ọzọ emelitere gụnyere Linux kernel 5.1.15, X.Org Server 1.20.5, Glib2 2.60.4, ICU 64.2, 1.69.0, NetworkManager 1.18.1, GStreamer 1.16.0, iptables 1.8.3, GNU nano 4.3, Krb5 1.17, Proj 6.0.0 na Poppler 0.78.0.
Kedu otu ebumnuche ISO a maka ụlọ ọrụ ọhụrụ E tinyela Calamares 3.2.9 onye na-ese ihe ngosi, nke nwere mgbanwe ụfọdụ iji zere nsogbu iwu metụtara ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia. N'aka nke ọzọ, modul nnabata nwere ikike ịhụ ebe ahụ site na IP iji họrọ asụsụ na-akpaghị aka yana Modul Partition na-enye nkwado nkwado nke ngalaba ndị dị ugbu a.
Ị nwere ike budata KaOS 2019.07 ugbu a kpọmkwem site na akwukwọ ọrụ, ẹdude ọrụ nwere ike imelite ha usoro enweghị reinstalling.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » KaOS Linux na-anata KDE Plasma 5.16 na Linux Kernel 5.1
Godot Engine na-aga n'ihu na-enwe ọganihu na nkwado ya maka Vulkan
Ndọtị kachasị mma maka GNOME